Sida lagu Helo iPad ka mid ah Recovery Mode
2 Siyaabaha HELI KARTID iPad ka mid ah Recovery Mode
Xayiran My iPad in hab kabashada ka dib markii aan u updated u macruufka dambeeyay 9! Waxaan u yeedhay kuwii Apple laakiin heshay war fiican lahayn. Ma doonayo in la siiyo ilaa. Haddii aad qabto talo wax wanaagsan, fadlan ii soo sheeg. Thanks.
Waxa ay u muuqataa in marka la xariirta macruufka, iPad mar walba stucks in Recovery Mode. Xaalku maaha kaliya ee stucking iPone in Recovery Mode. Mar kasta oo aad isku dayaan in ay dib sirta iPad, waxaa laga yaabaa inaad hesho iPad galay Recovery Mode aad. Ha ka werwerin in. Waxaa jira laba siyaabood oo basica fudud waxaad isku dayi kartaa si aad u hesho iPad ka mid ah Recovery Mode. Dooro mid ka mid ah in ay kugu habboon.
Xalka 1: Hel iPad ka mid ah Recovery Mode by celinta Waa in Settings Factory
Xalka 2: Hel iPad ka mid ah Recovery Mode aan celinta (No Data Loss)
Talooyin: Sida loo saar iPad galay Recovery Mode
Haddii aad iPhone ku xayiran on Recovery Mode iyo aad wax kama qaba badiyay dhammaan xogta ku saabsan iPad (macruufka 9 taageeray), waxaad isticmaali kartaa Lugood si aad u soo celin aad iPad galay goobaha warshad.
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad la your computer iyo ordi Lugood.
Tallaabada 2. Marka Lugood ogaadaa aad iPad, waxaa idin xusuusin doonaa in aad iPad waa in hab-kabashada iyo aad u baahan tahay si ay u soo celiyaan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji "Soo Celinta"
Fiiro Gaar ah: Tani waa sida offcial Apple ee ay u xaliyaan dhibaatada marka iPhone xayiran Recovery Mode. Si aad u noqoto qof daacad ah, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad sidan isku day in aadan sababta oo ah xogta oo dhan la masixi doono. Waxaad isku dayi kartaa sida soo socota. Waa In kastoo laga yaabo in aad qaadato 2 daqiiqo, laakiin idiin soo gudbin doonaa xogta iPhone aad.
Jidka Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ka baxdo aad iPad ka Recovery Mode oo aan dib u soo celinta aad iPad, taas oo macnaheedu yahay jiri doonin arrimaha khasaaro xogta. Laakiin waa in aad marka hore ka soo dejisan iyo gashato loo baahan yahay - Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) . Waxaa heli doonaa iPad ka mid ah Recovery Mode si fudud iyo hagaajin qaladaad inta aad soo celinta aad iPhone.
Tallaabada 1. Download Wondershare Dr.Fone ee macruufka oo ku xidh on your computer.
Tallaabada 2. Isku aad iPad si aad u computer la cable USB ah oo aan bilowno Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Barnaamijkan ogaan doonaa iPad iyo aad u sheegto in ay dib u bilaabeyso.
3. Riix Step "Operating System Repair 'oo Midigta sare ee suuqa ugu weyn. Oo waxay sameeyaan waxa aad qabato waxan sheegayaa: download firmware> dooro firmware macruufka> nidaamka qalliinka dayactir. In dhowr ilbiriqsi, waxaad arki kartaa iPad (oo ay ku jiraan arrimo 9 iPad) waa out of Recovery Mode iyo sida caadiga ah fuliya.
Talooyin: Sida loo saar iPad (macruufka 9) galay Recovery Mode
Tallaabada 1. Dami aad iPad.
Tallaabada 2. qabtay hoos button Home iyo batoonka aad iPad waqti isku mid ah. Marka aad aragto logo Apple waxay u muuqdaan, sii daayo button Power iyo sii riixaya badhanka Home ah.
Tallaabada 3. Lugood Launch iyo xiriiriyaan iPad la computer via cable USB ah ilaa aad ka heli heegan Lugood ah leh aad iPad waa in hab-kabashada. Waxaad arki doonaa shaashadda kor ku qoran on your iPad.
Hot Articles kale in uu xiiso u yaabaa in
Sida loo soo dir fariimaha qoraalka ka iPad
Ma u diri kartaa ama Hesho Text - dayactir Waxaa
Kabsado Messages tirtiray Facebook ka iPad
U dayactir 'Sapce gelin ku filan aan iPhone soo celinta ee kaabta'
Fariimaha qoraalka Transfer ka iPhone 6 ilaa Mac
Fix 'iPhone noqon maayo On'
Xal loo helo in Video beddelashada ka iPad in Computer
> Resource > iPad > iPad xayiran Recovery Mode ka dib markii Update - dayactir Waxaa